Paul Gorekore Archives - Zimbabwe Voice
MDC youths aligned to secretary general Douglas Mwonzora yesterday kicked out their colleagues led by Harare province chairperson Paul Gorekore from Harvest House. Gorekore took over control of the building in September as he tried to force Thokozani Khupe and Nelson Chamisa to engage in unity talks. Gorekore confirmed his group’s eviction saying they were forced to leave their belongings…
NAKED ambition, infighting and political gamesmanship have ripped apart interim MDC-T leader Thokozani Khupe party ahead of its planned extraordinary congress to choose a substantive successor for the opposition’s late founding leader, Morgan Tsvangirai. A report says that Khupe has between the Supreme Court ruling in March and last month flushed out more than two-thirds of MDC-T members who were…
MDC-T interim president Thokozani Khupe has with immediate effect suspended the opposition party’s Harare provincial youth chairperson Paul Gorekore. Gorekore, a former Harare councillor, recently teamed up with a group of fellow party youths and took control of the party head office known as Harvest House or Morgan Richard Tsvangirai House. The youths are calling upon party leaders, Khupe and…